Nanafatra ny fampielezana vaksininy i St. Barts hanokatra ny sisin-tany | Vaovao Karaiba
Home » Vaovao Karaiba » Nanafatra ny fampielezana vaksiny i St. Barts hanokatra ny sisin-tany
Manomboka amin'ny 19 aprily 2021, ny governemanta frantsay dia hanao fanentanana amin'ny fanaovana vaksiny hiarovana amin'ny olon-dehibe mendrika rehetra ao amin'ny nosy. Vinavinaina haharitra 2 ka hatramin'ny 3 herinandro ny fampielezan-kevitra.
Nametraka tanjona i Saint Barthelemy hanokatra ny sisin-taniny amin'ny tapaky ny volana Mey amin'ity taona ity.
Ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) dia mitana ny nosy St. Barts amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fampitandremana farany momba ny dia.
Ny sisin-tany ao amin'ny nosy St. Bart dia nakatona nanomboka ny 3 Febroary 2021.
Ny tanjona dia ny hanokatra indray ny sisin-tanin'i St. Barts amin'ny tapaky ny Mey. Amin'izao fotoana izao, ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) dia manisa ny haavon'ny COVID-19 any Saint Barthelemy ho avo dia avo (haavo 4), ny ambaratonga fampitandremana avo indrindra.
Nanomboka tamin'ny 3 Febroary 2021, dia namoaka lalàna ny Governemanta frantsay fepetra fisorohana manohitra ny COVID-19 "Variants" amin'ireo faritany rehetra any ampitan-dranomasina izay mitaky ny fanidiana ny sisintany vonjimaika ho an'ny mpitsidika rehetra (tsy tafiditra ao ireo mponina ao St. Barts, na inona na inona zom-pireneny).
Ny tranokalan'ny CDC dia manentana ireo mpandeha sorohy ny dia rehetra mankany St. Barts amin'izao fotoana izao, fa raha tsy maintsy mandeha ny olona iray, dia omeo ireto toro-hevitra ireto:
Alohan'ny handehananao dia andramo amin'ny fitsapana virtoaly 1-3 andro alohan'ny dianao.
AZA mandeha raha sendra tratry ny COVID-19 ianao, marary ianao, na manaporofo fa miabo amin'ny COVID-19 ianao. Ianaro hoe rahoviana no afaka mandeha ianao. Aza mandeha miaraka amin'ny olona marary.
Araho ny takiana fidirana rehetra alehanao ary omeo ny mombamomba ny fahasalamana takiana na angatahina.
Raha tsy manaraka ny takian'ny toerana halehanao ianao dia mety holavina ny fidiranao ary takiana hiverina any Etazonia ianao.
Mandritra ny dia, manaova sarontava, alaviro ny vahoaka, mijanona farafahakeliny 6 metatra amin'ny olona izay tsy miaraka aminao, manasa tanana matetika na mampiasa fanadiovan-tanana, ary tandremo ny soritr'aretina.
Alohan'ny hiverenanao any Etazonia amin'ny alàlan'ny rivotra, andramo amin'ny fitsapana virtoaly tsy mihoatra ny 3 andro alohan'ny hiaingan'ny sidinao. Ny valin'ny fitsapana dia tsy maintsy miiba. Tehirizo miaraka aminao mandritra ny dia ny kopian'ny valin'ny andrana raha sanatria ka mangataka izany ianao. Jereo ny fanontanina matetika momba ny fampahalalana bebe kokoa momba an'io takiana io. Araho ny toro-làlana na ny fepetra takiana amin'ny sidina rehetra.
Aorian'ny fitsangatsangananao dia mizaha toetra toetra 3-5 andro aorian'ny fitsangantsanganana ARY mijanona ao an-trano amin'ny quarantine tena mandritra ny 7 andro aorian'ny dia. Raha tsy voasedra ianao dia azo antoka ny mijanona ao an-trano amin'ny quarantine mandritra ny 10 andro.
Fantatra amin'ny anarana hoe Saint Barthelemy, St. Barts dia nosy Karaiba miteny frantsay fantatra amin'ny fisintahan'ny mpizahatany miaraka amoron-dranomasina fotsy sy fivarotana mpamorona. Ny renivohitra Gustavia dia manodidina ny seranan-tsambo feno yacht ary feno trano fisakafoanana avo sy toerana manintona ara-tantara.